Abanye abantu bathe, “Uma sigcina indlela yeNkosi uJesu futhi siziphatha ngokuvumelana nezimfuneko Zakhe, uma sithobekile futhi sibekezela, sithanda izitha zethu, sithwala isiphambano, sithiba imizimba yethu, sishumayela futhi senza umsebenzi weNkosi bese sifakaza Ngayo, uma sizama kulezi zinto, siyoba ngcwele.” Kungani kuyiphutha ukusho lokhu? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
18. Abanye abantu bathe, “Uma sigcina indlela yeNkosi uJesu futhi siziphatha ngokuvumelana nezimfuneko Zakhe, uma sithobekile futhi sibekezela, sithanda izitha …
Okwedlule：INkosi uJesu inguNkulunkulu onomusa nothando. Kuphela nje uma sisekela igama leNkosi uJesu futhi sigcina indlela Yakhe, sikholwa ukuthi lapho ebuya, ngeke asishiye, futhi siyohlwithwa ngokuqondile singene embusweni wezulu.
Okulandelayo：UNkulunkulu akaguquki phakade, ngakho kungani iNkosi uJesu iguqulele igama Layo kuNkulunkulu uSomandla?